Christian Dance "UNkulunkulu Ulethe Inkazimulo Yakhe Empumalanga" (Zulu) | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
17803 |June 22, 2018
UNkulunkulu unike inkazimulo yakhe ku-Israyeli wase eyisusa,
eletha u-Israyeli nabantu bonke eMpumalanga.
UNkulunkulu usebaholele bonke ekukhanyeni
ukuze babumbane futhi bahlangane nokukhanya,
bengasadingi ukufuna ukukhanya.
Uzovumela bonke abafunayo babone ukukhanya futhi
nenkazimulo aba nayo kwa-Israyeli,
babone esehla ngefu elimhlophe phakathi kwabantu,
babone amafu amhlophe babone izixheke zezithelo,
babon’uJehova uNkulunkulu, uNkulunkulu ka-Israyeli,
babon’iNkosi yamaJuda, uMesiya olangazelelwayo,
nokuvela okuphelele Kwakhe eshushiswa amakhosi eminyakeni.
UNkulunkulu uzokwenza umsebenzi womhlaba enz’imisebenzi emikhulu,
eveza yonke inkazimulo yakhe kumuntu ezinsukwini zokugcina.
UNkulunkulu uzoveza ubuso Bakhe obuphelele benkazimulo
kulabo ababemlindele iminyaka eminingi,
kulabo ababelangazela ukuthi eze ngefu elimhlophe,
ku-Israyeli obekade elangazelele ukuthi avele futhi,
kuso sonke isintu esishushisa uNkulunkulu.
Ukuze bonke bazi ukuthi uNkulunkulu kade ayithatha inkazimulo Yakhe
Ayikho eJudiya, ngoba izinsuku zokugcina sezifikile!